MAITIRO EKUMANIKIDZA KUREGA MAC ZVISHANDISO NEKHIBHODI YEKUDIMBUDZIRA - NYORO
Maitiro Ekumanikidza Kurega Mac Zvishandiso Nekhibhodi Yekudimbudzira
Pane dzimwe nguva apo kunyorera paMac yako kusingapindure kumirairo yako uye iwe usingakwanise kudzima izvo zvinoshandiswa. Zvino, haufanire kuvhunduka, kana ukasangana nemamiriro ezvinhu akadaro, sezvo idzi nzira nhanhatu dzaungasiye basa kana saiti kana chirongwa chine nzira pfupi chete yekhibhodi. Iwe unofanirwa kunge uine kusahadzika nezvekuti zvakachengeteka here kurega kunyorera nechisimba kana kwete? Saka pane tsananguro yekusahadzika kwako seinotevera:
nzira yekudarika youtube zera rekurambidzwa
Kumanikidza kurega kushanda kusingateereri kwakafanana nekuuraya hutachiona patinorwara. Unofanirwa kuona kutarisisa kweichi uye unzwisise kuti chii chiri dambudziko chairo uye ungarichengeta sei zvekuti harimbozoitikazve.
Saka, chikonzero ndechekuti iwe hauna ndangariro dzakaringana mune yako mac (RAM haina kukwana) . Izvi zvinoitika kana mac yako ichishaya ndangariro yakakwana kuti ishandise nemaapplication matsva. Saka pese paunomhanyisa basa pane yako mac, iyo sisitimu inova isingateereri uye inotonhora. Fungidzira RAM sechinhu chinoonekwa chine nzvimbo shoma yekugara kana kuchengeta chimwe chinhu ipapo, haugone kumanikidza chinhu kugadzirisa zvimwe zvinhu pamusoro pazvo. Kungofanana neiyo RAM yemac yako haigone kushandisa manyorerwo kupfuura kugona kwayo.
Maitiro 1: Unogona Kumanikidza Kusiya App kubva kuApple Menyu
Maitiro 2: Raira + Sarudzo + Tiza
Maitiro 3: Unogona kuvhara Ikozvino Active Mac App nerubatsiro rweKiyibhodhi yako
Maitiro 4: Unogona Kumanikidza Kurega Maapplication kubva kuDock
Maitiro 5: Unogona kushandisa Chiitiko Monitor Kumanikidza Kurega Mapurogiramu
Maitiro 6: Unogona kushandisa iyo Terminal & kuuraya Raira
Kuti udzivise kusapindurwa kwekushandisa, iwe unofanirwa kugara uchidzima zvinhu izvo zvausingade zvakare kubva kune yako mac kana iwe unogona zvakare kuchengetedza mafaera mune yako peni yekutyaira kuti uve nenzvimbo yakakwana yekushandisa akawanda maficha. Nekusaita kudaro, zvinogona zvakare dzimwe nguva kuguma nekurasa iyo data rakachengetedzwa. Saka, inotevera ndiyo nzira nhanhatu dzaungamanikidze kurega kunyorera paMac yako kana dzisingateerere:
Anotevera matanho ekushandisa iyi nzira:
Iyi ndiyo imwe yenzira dziri nyore dzekurangarira asi haisi iyo nzira ine simba zvakanyanya nekuti zvinogona kuitika kuti application haina kupindura uye menyu haikwanise kuwana mukana.
windows kugadzirisa 1803 inoramba ichitadza
Iyi nzira iri nyore kwazvo pane kushandisa iyo Chiitiko Monitor. Zvakare, iyi yakapusa bhatani yekurangarira. Iyi keypress inokutendera kuti ubvise maapplication akawanda kamwechete.
Iyi keypress ndiyo nzira pfupi yekusiya basa kana maitiro kana saiti kana daemon nechisimba.
Iyi ndiyo imwe yenzira dziri nyore dzekudzima kunyorera. Anotevera matanho ekushandisa iyi nzira:
Izvi zvichanyatso kubatsira mukugumisa kunyorera ipapo.
Ramba uchifunga kuti iwe unofanirwa kudzvanya iyi keystroke kana iko application yaunoda kuvhara ndiyo yega application pane yako Mac panguva iyoyo, sezvo iyi kiyi yekumanikidza ichamanikidza kurega zvese zvinoshandiswa izvo zvinoshanda panguva iyoyo.
Keystroke: Raira + Sarudzo + Shift + Tiza kusvikira iyo purogiramu yavhara nechisimba.
Iyi ndiyo imwe yenzira dzinokurumidza asi dziri nyore dzekuvhara mashandisirwo paMac yako. Zvakare, iri yakapusa nyore keypress yekurangarira.
Uyezve Verenga: Maitiro Ekudzima iyo Tsvaga yangu iPhone sarudzo
Tevedza anotevera matanho ekushandisa iyi nzira:
windows 10 tanga menyu troubleshooter kurodha pasi
Nekushandisa iyi nzira, iko kunyorera kuchamanikidzwa kurega pasina kusimbiswa saka, iwe unofanirwa kuve nechokwadi usati waisa nzira iyi.
Chiitiko Monitor imwe yedzakanakisa nzira dzekusiya chero app, basa, kana maitiro ekumanikidza ari kumhanya pane yako Mac. Unogona kuiwana wobva wadzvanya muApplications kana Utilities KANA iwe unogona kungoivhura nekudzvanya Command + Space wobva wanyora 'Activity Monitor' wobva wadzvanya kiyi yekudzoka. Iyi nzira inoshanda kwazvo. Kana nzira dziri pamusoro dzikatadza kumanikidza kurega kunyorera ipapo, nzira iyi ichashanda zvechokwadi. Zvakare, zviri nyore kwazvo kushandisa Chiitiko Monitor. Anotevera matanho ekushandisa iyi nzira:
Mune uyu killall rairo, iyo auto-savha sarudzo haishande saka, iwe unofanirwa kuve wakangwarira kwazvo kuti usarase yako isina kuponeswa yakakosha data. Inowanzo shanda padanho rehurongwa. Anotevera matanho ekushandisa iyi nzira:
Saka idzi dzaive nzira nhanhatu dzaungamanikidze kurega kunyorera pane yako mac kana ivo vasingateereri. Kunyanya, mafomu ako echando anogona kumanikidzwa kurega uchibatsirwa nenzira iri pamusoro asi kana iwe uchiri kusakwanisa kumanikidza kusiya chishandiso ipapo, unofanirwa kushanyira Apple Tsigiro .
windows 10 inoramba ichigadzirisa patsva mifananidzo yedesktop
Zvino, kana mac yako ichiri kusakwanisa kumanikidza kusiya chishandiso kunyangwe mushure mekushandisa nzira dzese idzi, saka unofanirwa kubata wako mac opareta. Iwe unofanirwa kuedza kufonera yavo yevatengi sevhisi uye kana vasingakwanise kukubatsira iwe, unofanirwa kubata Apple Tsigiro. Mumwe anogona kupedzisa kuti pane imwe nyaya inoenderana neyemacomputer neMac yako kana nzira dzese dzataurwa pamusoro dzatadza kushanda.
Yakurudzirwa: Gadzirisa iPhone Haikwanise Kutumira mameseji eSMS
Zvirinani kuyedza imwe neimwe nzira usati waenda kuchitoro chehardware uye kuburitsa mari zvisina basa. Naizvozvo, nzira idzi dzinobatsira mukugadzirisa dambudziko rako nenzira inodhura.
akanakisa windows 10 password password
sd kadhi muverengi mudziyo maneja
windows 10 chimiro chekuvandudza 1803 chakundikana
Edge icon isipo windows 10